Igwe igwe eletrik kachasị mma, olee otu ha si arụ ọrụ? | Akụkọ akụrụngwa
Igwe igwe eletrik kachasị mma
Igwe igwe eletrik abụrụla ụzọ dị mma ugbu a ruo oge ụfọdụ ma ọ bụrụ na anyị bi n'obodo ebe okporo ụzọ ụgbọ ala na-echegbu onwe ya. N'ihi usoro njem a dị ọcha, ọ bụghị naanị na anyị na-emega ahụ kamakwa anyị na-ezere mmetọ, na mgbakwunye na ibelata oge ọ na-ewe anyị ịkwaga. Ọ na-enye anyị ohere ịpasa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ọ bụla, na-enweghị nchegbu gbasara ebe a na-adọba ụgbọala, mpaghara anụnụ anụnụ na ndị ọzọ n'oge ọ bụla.
Ogologo ọsọ igwe ịnyịnya ígwè nwere ike iru Ọ dị n’etiti 25 na 30 km / h, nke nwere etiti 60 na 80 km dabere na ihe nlereanya ahụ, ịdị arọ nke onye ọrụ na ụdị ụzọ anyị na-aga (ọ bụghị otu ịgbasa na ala dị larịị karịa na ala nke jupụtara na mgbago ma ọ bụ mgbada). N’isiokwu a anyị ga-egosi gị igwe eletriki kachasị mma na-ekpuchi ọtụtụ mkpa na ihe ụtọ.
Tupu ịzụta igwe eletrik eletrik ị ga-edozi nke ọma banyere ihe ọ bụ na ihe ọ bụghị. Igwe eletrik na-achọ ka anyị na-agba ụkwụ maka moto ahụ ka ọ rụọ ọrụ, ebe ọ na-arụ ọrụ dị ka onye na-enyere aka n'ịzụ. Typedị ịnyịnya ígwè a achoghi ikike obula igbasa. Otú ọ dị, ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka mopeds eletriki, ihe na-agbanwe nke ukwuu, ebe ọ bụ na anyị na-ahụ onwe anyị na moped na-arụ ọrụ naanị na ọkụ eletrik, ya mere, a na-ejikọta ya na mkpuchi nkwekọrịta na ikikere kwekọrọ na ya ịkwọ ya.
1 Kedu igwe igwe eletrik na-arụ ọrụ
2 Isi ihe ị ga-atụle mgbe ịzụrụ igwe eletrik
2.1 Manufacturing ihe / arọ
2.2 Ndụ Batrị / Oge Nchaji
2.3 Onwe ya
3 Igwe eletrik n'etiti euro 500 na 1000
3.1 Sunray 200 - Igwe eletrik na-agagharị agagharị
3.2 Moma - SHIMANO igwe eletriki igwe eletrik - 26 «
3.3 Moma - SHIMANO mpịachi Electric Bike - 20 «
3.4 Teamyy 26 Inch mpịachi Electric Mountain Bike
4 Igwe eletrik n'etiti euro 1000 na 2000
4.2 Igwe eletriki igwe eletriki igwe eletriki eletriki eletriki eletriki
4.3 IC Electric mpịakọta ịkpakọba Electric Bike
5 Igwe igwe eletrik site na 2000 euro
5.1 Pụrụ iche Turbo Levo FSR
5.2 Brompton Eletriki
Kedu igwe igwe eletrik na-arụ ọrụ
A na-ahụta igwe eletrik ndị na-arụ ọrụ site na ụdị mkpali abụọ: ịkụda ụkwụ na ekele maka nkwado nke igwe eletrik nke na-amalite dị ka mkpa anyị si dị mgbe anyị na-agagharị ma ga-akwụsị mgbe anyị kwụsịrị ime ya. A na-akpọ sistemụ nrụọrụ a enyere aka, sistemụ nke anyị nwere ike ime na igwe ndị ọzọ ekele kits rere iche.
Ike kachasị nke igwe eletrik eletrik bụ 250 W, ọ bụ ezie na n'oge ụfọdụ, ha nwere ike iru ihe ruru 350 W na oke ọsọ ha bụ 25 km / h. Igwe ndị na-ekwu na a na-akpọ eletriki nwere 500 W nke ike dabara n'ụdị igwe mopeds eletriki, yabụ ha dara n'èzí ụdị a.
Isi ihe ị ga-atụle mgbe ịzụrụ igwe eletrik
Isi mmalite: Flickr - Matt Hill
Manufacturing ihe / arọ
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-emepụta ihe na-eji aluminom rụọ chassis nke igwe eletrik, anyị nwekwara ike ịchọta ụdị eji ígwè. Dabere na uru nke ihe nlereanya ọ bụla na-enye, anyị ga-eburu n'uche ibu ahụ, ebe ọ bụ na anyị jikọtara na nke anyị ọ ga-emetụta nnwere onwe ọ ga-enye anyị.
Ndụ Batrị / Oge Nchaji
Ndụ batrị anọwo, ọ ga-aga n'ihu na-abụ ọnụọgụgụ nke mbụ na ngwaọrụ ọ bụla nwere ọkụ eletrik. Dabere na mkpa ma ọ bụ ojiji anyị na-ezube ịnye igwe, anyị ga-eburu n'uche oge nkwụ ụgwọ. N'ahịa anyị nwere ike ịchọta ndu, batrị lithium na nickel cadmium batrị. Onye ọ bụla na-enye anyị oge dị iche iche na-akwụ ụgwọ, oge nke doro anya dabere na ike ya.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ iji igwe eletriki eletrik aga ọrụ, anyị ga-ebu ụzọ mara ebe ọ dị, ebe ọ bụ na ikike ịchị onwe ya dị ihe dịka kilomita 50. Ọ bụrụ na ebe dị anya karịa kilomita iri na ise anyị nwere ike ịnwe chegharia echiche ma obu tinye ego n’ime ihe nlere nke ahụ na-enye anyị nnwere onwe kachasị, nnwere onwe nke dabere na holography nke ụzọ.
Akụkụ ahụ dị iche iche na-abụkarị ndị ọrụ n'ụdị ngwaọrụ a, ọ bụrụ na anyị ahọrọ ịchekwa euro ole na ole ma tụkwasị ego anyị obi na onye nrụpụta a ma ama ma ọ bụ nke enweghị ọrụ ọrụ aka na mba anyị. Shimano dị n'ahịa ruo ọtụtụ afọ, ọ bụ ezie na na igwe eletrik igwe eletrik nwere obere ihe, ọ bụ ezie na ọ na-enyerịrị anyị ọnụọgụ nke ụdị. Brandsdị ndị ọzọ na-enye ntụkwasị obi zuru ezu n'ahịa igwe, ọkụ eletrik ma ọ bụ na ọ bụghị, bụ Trek, Pụrụ iche, Haibike, Scott ...
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka igwe eletriki nke igwe a, otu n'ime akụkụ ndị kachasị mkpa, ụlọ ọrụ German bụ Bosch bụ akara ngosi n'ụwa a ma e wezụga ịbụ otu n'ime ndị ọsụ ụzọ na mpaghara a. Panasonic, Brose na Shimano Steps bụ ndị nrụpụta ndị ọzọ na-enyekwa igwe eletriki igwe eletrik. Otu n'ime mgbakwunye ndị kachasị ọhụrụ bụ ụlọ ọrụ Japan bụ Yamaha, ụlọ ọrụ n'agbanyeghị na ha nọrọ afọ abụọ na ahịa e-igwe na-agbakọta injin ya na Haibike, Lapiperre na BH Emotion.
Igwe eletrik n'etiti euro 500 na 1000
Sunray 200 - Igwe eletrik na-agagharị agagharị
Bikegbọ ịnyịnya a nke na-agagharị agagharị site na Sunray na-enye anyị igwe e ji igwe rụọ, igwe elekere dị sentimita iri abụọ na isii, nkwusioru n'ihu yana diski brek n'ihu drum n'azụ. Site na sistemụ aka na-enyere aka (PAS), ọ na-enye anyị a 250w moto, 3 pedaling aka ụdịdị, a 36 v na 10 Ah batrị. Nnwere onwe dị n'etiti kilomita 35 na 70 dabere na nkezi ọsọ anyị na-agagharị. Sunray 200 nwere ọnụego ego ruru euro 600.
Ọwụwa anyanwụ igwe eletriki 200
Moma - SHIMANO igwe eletriki igwe eletrik - 26 «
Shimano's Moma nlereanya na-enye anyị aluminom aluminium nwere mkpokọta ịdị arọ nke 20 n'arọ, batrị 36 na 16 Ah. Ngosipụta LCD nke anyị nwere ike ijikwa igwe eletrik na-enye anyị ọkwa enyemaka nke pedal 5, akara ngosi ọsọ, njem dị anya na ọkwa batrị. Oge nkwụ ụgwọ bụ awa 4, nke anyị nwere ike ịga njem ihe dị ka kilomita 80 na a ọsọ kacha elu 25 km / h. Imdị Moma Shimano nwere ọnụahịa ruru euro 800.
Moma - SHIMANO mpịachi Electric Bike - 20 «
Ọ bụrụ na igwe kwụ otu ebe na igwe elekere 26 dị oke oke maka gị, Shimano na-enye anyị obere ihe atụ na obere mkpanaka na wiil nke 20. Ihe nlereanya a nwere a nnwere onwe nke ruru kilomita 80 ma nwee ibu nke 18 n'arọ. Dị ka ụdị nke 26-inch, ahụ bụ nke aluminom nke na-enye anyị ohere inweta ọsọ ọsọ nke 25 km / awa, yana nnwere onwe nke 80 km. 20-inch Shimano Moma nwere ọnụahịa efu nke euro 700.
Moma - SHIMANO 20 Inch Folding Electric Bike
Teamyy 26 Inch mpịachi Electric Mountain Bike
Igwe igwe kwụ otu ebe nwekwara ebe na igwe eletriki igwe eletriki. Teamyy na-enye anyị igwe kwụ otu-igwe 26-inch nke nwere oke ọsọ nke 30 km / h, nke emere nke aluminom ma dabara adaba maka ndị ọrụ n'etiti 165 na 185 centimeters, ebe enwere ike ịgbanwe oche site na 80 ruo 95 cm. Oge nkwụ ụgwọ dị n'etiti awa 4 na 6, nke na-enye anyị obere ọchịchị obodo karịa igwe kwụ otu ebe dị n'etiti 45 na 55 kilomita. Ihe nlereanya a nwere ibu ikike na-erughị 200kg, na ike na-erughị 500 w na batrị 36 v. Ihe ruru ọnụahịa nke ihe nlereanya a bụ euro 760.
Igwe eletrik n'etiti euro 1000 na 2000
The Shimano Cruiser bụ obosara igwe eletriki igwe eletrik nke na-egosipụta njigharị eletriki aka / pedal aka. Mkpokọta ibu nke ihe nlereanya a nke aluminom ruru kilogram 26, nke nwere wiil 26-inch. Batrị 36v 10.4 Ah nwere oge nkwụ ụgwọ nke dị n'agbata awa 2 na 3 wee nye anyị ike nke 350 w. Ọ nwere a nche usoro na oku abụọ, otu maka ome osooso na ndị ọzọ maka batrị odori. Igwe etiti bụ Shimano M410E na azụ bụ Shimano TX35. Ngwongwo gia bụ Shimano TX.50-21. Ihe ruru ọnụahịa igwe kwụ otu ebe nke Shimano Cruiser bụ euro 1.400.
Igwe eletriki igwe eletriki igwe eletriki eletriki eletriki eletriki
A na-eji aluminom rụọ IC Electric Emax, breeki abụọ bụ diski ma nwee ndụdụ nkwonkwo XCR. Batrị 36 v na 10 Ah na-enye anyị ike nke 250 wy obodo kwụụrụ n’agbata kilomita iri anọ na iri isii. IC Electric Emax nwere ọnụahịa ego ruru euro 1.300.
IC Electric mpịakọta ịkpakọba Electric Bike
Mpempe akwụkwọ mpịachi na-enwekwa ebe dị na ọnụahịa ego a. Na a aro nke 20 n'arọ, na IC Electric Plume bụ a mpịachi ịnyịnya ígwè na a obodo kwụụrụ n’agbata kilomita 55 na 65, ekele ya batrị 360 w na 11 Ah nke ahụ na-enye anyị ike nke 250 w. Ma breeki na azụ na azụ bụ diski, o nwere ngwa ngwa Shimano 7 na ekele maka mpịachi ya, anyị nwere ike ibugharị ya n'ụzọ ụgbọ oloko, ụgbọ oloko ma ọ bụ ụgbọ ala anyị. Ọnụahịa nke ihe nlereanya a bụ euro 1050.
Zụrụ IC Electric Plume mpịachi Electric Bike
Igwe igwe eletrik site na 2000 euro
Ọ bụrụ na anyị gafere ihe mgbochi nke euro 2.000, n'ahịa anyị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụdị, ha niile emebere iji gboo mkpa ụfọdụ.
Pụrụ iche Turbo Levo FSR
Firmlọ ọrụ a na-enye anyị igwe eletrik ndị ejiri mara zoo batrị na ọkpọkọ ala nke ahụ na-enyere anyị aka ịtinye batrị ngwa ngwa na mgbakwunye na inwe ike ịgbanwe ya n'enweghị nsogbu. A na-eji aluminom ma ọ bụ carbon mee ụdị Turbo Levo FSR, ma nwee turbo nke na-enye 15% batrị karịa ụdị ọdịnala. Site na moto a haziri ahazi, sistemụ pedal ga-enweta enyemaka dị mkpa ozugbo anyị chọrọ ya nke ukwuu na ọgbụgba uche maara nke ọma n'ogo niile.
Ekele maka ngwa njikwa nke ozi anyị nwere ike ịchịkwa oge niile na teknụzụ ndị ụdị a gbagoro. Ngosipụta nzọ ụkwụ, dị na ụdị niile, na-enye anyị data nke anyị kwesịrị ịma n’oge niile nke njem anyị na-aga. Ekele maka Ọnwụnwa Ikpe Ahụ anyị nwere ike ịgbanwe ngwa ngwa n'etiti ụdị dị iche iche na-enweghị ịhapụ aka anyị n'aka njikwa. Modelsdị Pụrụ iche Turbo Levo FSR dị na-amalite na euro 4.200.
Igwe igwe eletriki Brompton na-enye anyị enyemaka dị mkpa mgbe anyị na-arị ugwu ma ọ bụ na-eme ogologo njem na mbara ala dị larịị, na-emegharị maka ụdị ịnya anyị n'ihi ekele teknụzụ nwere ọgụgụ isi. Site na ngwa ngwa ngwa ngwa, anyị nwere ike ibufe ya na enweghị nsogbu na ụzọ ụgbọ oloko, bọs ma ọ bụ ụgbọ oloko. Na mgbakwunye, site na ịdị arọ nke 13,7 n'arọ, ihe karịrị 2,9 nke batrị na-aghọ na otu n'ime ụdị kachasị ọkụ na ahịa.
Ekele maka batrị 300 w, anyị nwere ike ịga na ọsọ nke 25 km / h na a nso nke n'etiti 40 na 80 km, dabere na ibu ibu nke onye ọrụ na ụdị ụzọ. Oke kachasị ọ na-akwado bụ kilogram 105, gụnyere akụrụngwa. Na Brompton Electric ọnụahịa, nke a ga - amalite ịmalite n'ahịa na mbido 2018, ga - adị n'etiti 2.800 na 3.000 euro, ọnụahịa nke ziri ezi site na njirimara ngwaahịa ahụ na n'ihi na arụpụtara ya kpamkpam na United Kingdom.
Onye nrụpụta Scott, dị ka Specialized, na-enye anyị a ụdị dịgasị iche iche nke ụdị maka masịrị gị niile na mkpa site na euro 2.000, ha niile nwere ike nke 250 w nke na-enye anyị enyemaka dị mkpa n'oge kwesịrị ekwesị. Cheta na ezubere igwe igwe nke ndị nrụpụta a maka ndị ọrụ chọrọ ndị chọrọ enyemaka ọzọ site n'oge ruo n'oge ruo ebe ha na-aga.
Scott na-enye anyị ụdị dị iche iche mee nke aluminom na carbon, diski brek, Shimano na Syncros. Batrị ahụ zoro n'ime igbe nwere ohere ozugbo mgbe anyị ga-aga n'ihu ịgba ya. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhụ ụdị niile dịnụ ị nwere ike ịga na ngalaba weebụsaịtị nke Scott maka igwe eletrik ebe ị ga-ahụ ihe karịrị ụdị 30.
Firmlọ ọrụ Haibike na-enyekwa anyị ụdị atọ nke ụdị XDURO FullSeven Carbon: 8.0 nke ọnụahịa ya bụ euro 4.999, 9.0 nke bụ 6.999 euro na 10.0 nke dị na euro 11.999. All ndị a ụdị na-mere nke carbon, iwekota a Bosh engine nke awade a ọsọ kachasị nke 25 km / awa ekele moto 250 w. Dị ka ọtụtụ ụdị ndị dị elu, batrị dị n'ụdị ndị a dị na ogwe diagonal, na-enye anyị ohere ịnweta ngwa ngwa iji kwụọ ụgwọ ma ọ bụ dochie ya na ọzọ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
N'ihi iji carbon eme ihe, ọ bụghị naanị na-ewu etiti ahụ, kamakwa n'ọtụtụ akụkụ dị iche iche nke bụ akụkụ nke igwe kwụ otu ebe, ịdị arọ na oghere ha na-eburu na-ebelata nke ukwuu ma e jiri ya tụnyere ụdị ndị ọzọ. The wheel size bụ 27,5 sentimita asatọ na niile ụdị, o nwere haịdrọlik diski brek na ma ihu na azụ na chaja nke onye nrụpụta nyere bụ ụdị ọsọ, nke mere na anyị na-egbusi obere oge dị ka o kwere mee iji batrị batrị igwe eletrik anyị.
Na weebụsaịtị Haibike ị nwere ike ịchọta ụdị ịnyịnya igwe eletrik niile na ihe a na-ahụta mopeds eletrik, na-eru oke ọsọ nke 45 km / h, nke rChọrọ mkpuchi na ikike ịkwọ ụgbọala dika m kwuru n'elu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Igwe igwe eletrik kachasị mma